I-Realme X kunye neRealme X yoLutsha yoHlelo iya kukhutshwa ngoMeyi 15 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Enye yevenkile ezinkulu ze-Intanethi zaseTshayina, iJingdong (JD.com), iqinisekisile amagama asemthethweni eefowuni ezizayo zeRealme, kunye nomhla wokukhutshwa kwazo.
I-Realme iza kungena kwintengiso yefowuni yaseTshayina kule nyanga kwaye iyakwenza njalo kwisitayile ngokwazisa ngefowuni ephambili, ekuye kwabizwa ngokuba yiyo Realme X.
Uhlobo, olwalubhiyozela isikhumbuzo salo sokuqala kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, lwalukhethekile eIndiya, nangona ngoku lusenjalo uza kungena eYurophu. Sele ikhuphe iifowuni ezisixhenxe, zonke eziwela kudidi oluphakathi kwinqanaba. Nangona kunjalo, kuphehlelelo lwayo lokuqala e-China, iRealme iza kwazisa ngeReal X, eya kuthi ixhotyiswe yi-Qualcomm's flagship chipset, i Snapdragon 855, ukuze uyibeke njengesiphelo esiphakamileyo. UJingdong ukwatyhile ukuba uza kuzisa umntakwabo omncinci, owaziwa njengo Ushicilelo loLutsha lweRealme X.
Umhla wokuKhutshwa kweRealme X utyhilwe nguJingdong
UJingdong, onephepha elimiselwe iifowuni ezimbini, naye ulayishe uluhlu lwezi zinto zityhila oko Iifowuni ziya kutyhilwa ngokusesikweni ngoMeyi 15, Ulwazi ekusafuneka luqinisekiswe kwaye lupapashwe ngumenzi.
I-Realme iceba ukwenza isibhengezo esikhulu malunga neRealme X, ngomso ngentsimbi yeshumi (ixesha laseTshayina), kwaye ngokuqinisekileyo sicinga ukuba malunga nomhla wokuqaliswa kwesixhobo, kunye nokwahluka kolutsha. Nangona kunjalo, i-JD.com iye yavumela ikati ukuba iphume engxoweni kwangoko.
I-Realme X Ilogo
I-Realme X yoHlelo loLutsha ILogo
Ngokusekwe kulindeleke, iRealme X iya kuba noyilo olupheleleyo lwesikrini ngaphandle kwenotshi kwaye ibezel kuphela ezantsi kwesikrini, eya kuthi icekeceke. Iya kuba nekhamera ye-selfie ye-pop-up, iikhamera ezimbini zangasemva, kunye neskena sokubonisa ngeminwe. Kwakhona, uHlelo loLutsha lweRealme X kulindeleke ukuba lube noyilo olufanayo kodwa iprosesa engenamandla, kunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme X kunye neRealme X yoLutsha yoHlelo ziya kukhutshwa nge-15 kaMeyi